किन लाग्यो पार्टी कार्यालयमा ताला ? – sunpani.com
किन लाग्यो पार्टी कार्यालयमा ताला ?
सुनपानी । २ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार मा प्रकाशित
नेपालगञ्ज – नेपाली कांग्रेस, बाँकेको पार्टी कार्यालयमा ताला लागेको छ । तरुण दल क्षेत्र नं. ३ ले पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको हो ।
पार्टीका पूर्व क्षेत्रीय सभापति महेन्द्र मल्लसँगको विवादलाई लिएर पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको थियो । तरुण दल र मल्लका बीचमा सामान्य विवाद भएको थियो । त्यसक्रममा तरुण दलसम्बद्धले घरमा ढुंगा हानेको भन्दै मल्लले प्रहरीमा उजुरी गरेका थिए । मल्लको उजुरीपछि प्रहरीले तरुण दलका एकजनालाई समातेको छ ।
आफ्नो मान्छेलाई फसाइएको भन्दै तरुण दलका क्षेत्रीय सभापति सन्तोष अधिकारीको टोलीले पार्टी कार्यालयमा ताला लगाएको थियो । पार्टी सचिव कपिल शर्माले पार्टी कार्यालयमा लगाइएको ताला केहीबेरमै उनीहरुले खोलेको बताउनुभयो । ‘खजुरामा भएको विवादलाई लिएर तालाबन्दी गर्नु भएको थियो । केहीबेरपछि ताला खुल्यो, जिल्ला सचिव शर्माले भन्नुभयो ।
पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरीको उपस्थितिमा कार्यक्रम हुने भएपछि युवाहरुलाई फकाएर ताला खोल्न लगाइएको थियो । केन्द्रीय सदस्य गिरीले नेपालगञ्ज आएको मौकामा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्नु भएको थियो ।